Horjoogayaal iyo Maleeshiyaad ka tirsan argaggixisada Al-shabaab oo lagu laayay Gobolka Hiiraan | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Horjoogayaal iyo Maleeshiyaad ka tirsan argaggixisada Al-shabaab oo lagu laayay Gobolka Hiiraan
Horjoogayaal iyo Maleeshiyaad ka tirsan argaggixisada Al-shabaab oo lagu laayay Gobolka Hiiraan
SNTV:-Dagaal xooggan oo u dhaxeeyay dadka deegaanka iyo maleeshiyaadka Alshabaab ayaa ka dhacay inta u dhaxeysa degmooyinka Halgan iyo Buullo-burde ee Gobolka Hiiraan.
Dagaalka ayaa yimid kadib markii maleeshiyada Alshabaab ay isku dayeen in ay xoollo baad ah ka qaataan dadka xoollo dhaqatada ah ee ku nool Gobolka, iyadoo dadka deegaanka ay ka biya diideen in ay bixiyaan lacago iyo xoollo baad ah.
Qaar ka mid dadka deegaanka oo la hadlay Warbaahinta Qaranka ayaa sheegay in ay dileen 5 ka tirsan horjoogayaasha iyo maleeshiyada Alshabaab, kadib dagaal xooggan oo dhex maray argagixisada iyo dadka deegaanka.
Billihii ugu dambeeyay ayaa waxaa socday howlgallo lagu baacsanayay haraadiga Alshabaab oo ay soo wajahday cabsi xooggan, kadib markii ay bilaawdeen howlgallo argaggixisada looga sifeynaayo deegaanada ay ku dhuumaaleysanayaan, kuwaas oo ay ku dhibaateeyaan dadka rayidka ah.
Previous articleHaweenay soo xirtay dharka Ragga oo ay Ciidamada Amniga Gobolka Mudug ay gacanta ku soo dhigeen
Next articleWasiir Sadiiq Warfaa: “Wax ka badelka Sharciga Shaqaalaha rayidka wuxuu Sahlayaa in la helo Shaqaale xirfad leh”